WRESTLING - Waa nooc ka mid ah OLYMPICS TRADITIONAL OLYMPICS ee Vietnam - Dhulkii Quduuska ahaa ee Daraasadaha Vietnam
Marka loo eego cilmi-baarayaal dhaqameed, waxaa jira labo suugaan oo wada-noolaanshaha Fiyatnaamiis: aqoonyahan ah suugaanta iyo caanka ah suugaanta. Sidaa awgeed, waxaa sidoo kale jiri kara laba nooc daraasadda fanka dagaalka ee Fiyatnaam: Study ee fanka dagaalka ee qoyska boqortooyada (barashada farshaxanka iyo imtixaanada halyeeyada) iyo halgan dhaqameed (xilliyada ciidaha).
Halgan dhaqameed waa nooc isboorti iyo nashaadaad jir ahaaneed iyo waliba dhaxal dhaqan oo aadanaha, kaas oo Vietnam iyo dalal kale oo badan ay leeyihiin taariikhdii hore. Anaga oo adeegsanayna fikirka aan la koobi karin iyo lahjarka, waxaan dhihi karnaa sidan: legdinta waxay dhaxleen “hiddo-wadaha aadanaha”, kana yimid xayawaannada ku nool biyo, geedaha, iyo dhagaxyada dusheeda, xayawaannada ku nool dhulka iyo bulshada bani'aadamka ee leh abaabul bulsheed oo horumarsan. Halgan dhaqameed of Vietnam dhaxlay "hiddo-wadaha aadanaha" sida kor lagu sheegay. Waxay furtay waddo lagu horumariyo noocyo kale oo isboorti iyo farshaxanno dagaal ah. Fiyatnaamiis halgan dhaqameed, sida caadiga ah cayaaraha loollannada ee lagu qabto maalmaha ciidaha dirirka ee gudaha Lieu Doi (Nam Haa), waxaa loo tixgeliyaa an Ciyaaraha Olombikada ee Fiyatnaam, kaas oo ka horreeyay fanka dhaqanka fiyatnaamiiska.
Dadku waxay ku tartameen fanka fanka muddo kumanaan sano ah
Waxay dalkooda difaaci karaan tobanaan kun oo sano.
Waqtiyadii hore ee Roomaaniga, gladiators-yada waxay u dagaalami jireen inay is dilaan. Waxay la mid ahayd ciyaar faneed faneed lagu raalli gelinayo horyaalnimada. Waxay kaloo ahayd hab lagu noolaado oo ka beddeli kara fasallada inay noqdaan addoonsiga isla markaana noqda aristocrats (kadib markii ay urursadeen lacag ku filan). Taa bedelkeeda, halgamayaasha Vietnam waxay u dagaallamayeen tuulooyinka, iyagoo u keenay nafsi dagaal iyo muujinta qummanaanta in lagu ammaano sida Koowaad Laureates. Waxay sugayaan maalinta inay ka adkaadaan cadowga oo ay dalka difaacaan.
Adigoo adeegsanaya warmo samada hoosteeda ah. Isagoo u hadlaya sidii onkod.
Raggu waxay soo qaban karaan shabeellada. Dumarku way dumin karaan tiirka macbadka.
Dagaallo badan kadib, ugu dambeyntiina, dadka Fiyatnaamiis ka adkaaday duulaannada Shiinaha (laba jeer ka dhanka ah ciidamada Tong, saddex jeer ka dhanka ah ciidamada Nguyen, mar waa la dagaalamay ciidamada Minh, mar waa la dagaalamay ciidamada Thanh). Halgan dhaqameed wuxuu ahaa mid baahsan oo aan ku xaddidneyn goobta loolannada laakiin wuxuu sidoo kale ku fiday qaabab kale oo fanka dagaal oo leh noocyo kale oo hub ah sida guntinle, garaacis, seefayaal, qoryaha bamboo, iwm.
Booska loogu talagalay ku dhaqanka fanka dagaalku kuma koobnayn daaraha iyo tuulooyinka laakiin sidoo kale waxaa lagu arki karaa baagaga Buddhist markii Budhisnimada la sharfay intii lagu jiray Ly-Tran erey.
Si ka duwan kuwii gladiators-ka Roman ee u tababaray muruqyadooda inay seefahooda iyo mindiyohooda ku garaacaan kuwa ka soo horjeeda, dagaalyahanada Vietnam waxay leeyihiin tababar jimicsi oo dhameystiran si ay uga jawaabaan xaalad kasta markay wajahayaan cadawga. Mid ka mid ah qoyskii Nguyen Dynasty ayaa faallo ka bixiyay: “… Dadku waxay fuulaan buurta iyagoo cagahooda lugaynaya sida ugu dhakhsaha badan dabaysha. Kama baqaan adkaynta. Ragga waa xiireen oo ay quusin karaan dhawr saacadood, ku dhex dabbaalan karaan biyaha sida socodka dhulka, saillikeflying,…. ”
Jaantus: Nguyen Manh Hung - Vietnamese wax ku iibinta Dhaqanka
Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro xilliga nabadda, gaar ahaan waqti dheer oo nabdoon sida Ly-Tran, fanka dagaalku wuxuu noqday mid ka mid ah isboortigaas oo aan la isticmaalin kaliya muruqyada (gacmo furan) laakiin sidoo kale ay ku jiraan noocyo kale duwan oo kala duwan sida adeegsiga gaashaaman, qaansooyinka, seefta, sawirada, orodka, qaniinka 'danh phet', iwm.
Maxkmadda boqortooyada Le-Nguyen Dawladihii hore, jeneraalada iyo askartu waxay ku tababareen fanka dagaalka si ay u difaacaan qoyska boqortooyada una jabiyaan cadawga. Waqtigaas, marka laga reebo imtixaannada xulashada maandooriyaha madaniga ah, waxaa sidoo kale jiray imtixaanno xulashada hoggaamiyeyaasha militariga (imtixaannada fanka dagaalka).
◊ WRESTLING - Nooc ka mid ah OLYMPICS dhaqameed ee Vietnam - Vi-VersiGoo
(Booqday jeer 1,299, booqashooyinka 4 maanta)
Views Views: 2,864
← Holylandvietnamstudies.com oo leh 104 LUQADDII CAALAMKA - Nooca Fiyatnaamiis waa luqadda asalka ah & nooca Ingiriisiga ah waa Set-up af qalaad